Gbasara Anyị - Hangzhou Hongli Machines Co., Ltd.
Tọrọ ntọala na August 2002, ụlọ ọrụ ahụ nwere ihe karịrị ndị ọrụ 70, ebe a na-arụ ọrụ 6, yana ụlọ ọrụ teknụzụ dị na Zhejiang Province. Companylọ ọrụ ahụ dị na ogige ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke Linpu Town, Xiaoshan, Hangzhou City, Zhejiang Province, otu kilomita site na ọpụpụ Linpu nke Hangzhou Jinhua Quzhou Expressway na-esote East n'akụkụ ụzọ okporo ụzọ mpaghara 03. Companylọ ọrụ na igwe igwe dijital, na-abụghị -echeputa ihe eji emeputa ihe ma meputa ya, igwe ogu kachaa elu, ihe nhazi ya.
Nkà ihe omumu ahia: iguzosi ike, ịdị n'otu, pragmatism, ihe ohuru na uto na-adigide
Ntọala ya na 1997, Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments CO., LTD bụ ọkachamara na onye nrụpụta ihe maka ngwaọrụ nyocha n'ozuzu gụnyere Digital Thermometers, Infrared Thermometers, na Digital Sphygmomanometer wdg. Ikike anyị kwa ọnwa dị ihe dịka 850,000 nkeji maka temometa na 100,000 nkeji maka Sphygmomanometer.
Dị ka ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu, ngalaba R&D dakọtara injinia, teknụzụ na onye nrụpụta ahụmịhe bara ụba nke optoelectronics, semiconductor na IC design wdg.
Anyị guzobelarịrị usoro QC siri ike ma dị irè. A na-emepụta ngwaahịa anyị niile nke ọma n'okpuru usoro njikwa mma nke ISO 13485 na 21CFR820, iji mezuo chọrọ Medical CE na US FDA chọrọ.
Ọmarịcha ọrụ na ezigbo mma enyere anyị aka inweta aha ọma n’ụwa niile, dịka ọmụmaatụ:
Germany, France, Italy, Spain, United Kingdom, Poland… USA, Brazil, Argentina, Colombia, Mexico, Chile… Australia, Philippine, Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapore… South Africa, Nigeria… Na mba ndị ọzọ
Ọ ga-enwe ekele dị ukwuu na ọ bụrụ na ịnwere ike ịkpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ gbasara ụlọ ọrụ na ngwaahịa anyị. Nnabata iji kwado anyị site na OEM na ODM.